म रोजगारदाता हुँ « Centre for Harmony and Enhancement of Ethnic Minority Residents (CHEER)
म रोजगारदाता हुँPrint
यदि मलाई अल्पसंख्यक कामदार चाहिएमा मैले के गर्नु पर्छ?
पदको लागि भाषा कुशलता आवश्यकता भएको b>
कामको प्रवृत्तिको समीक्षा गर्नुहोस् र छुट्ट्याउनुहोस् कि यदि सो पदको लागि उम्मेदारहरूलाई क्यान्टोनिज वा अंग्रेजी पढ्न-लेख्न बुझ्न बोल्न आवश्यक पर्छ कि भनेर। त्यसले तपाईलाई सहि उम्मेदार पाउन सहयोग गर्छ
तपाईले प्याकिङ गर्ने कामदार राख्न चाहानु हुन्छ भने, सो कर्मचारीले सामान प्याक मात्र गर्नुपर्ने र कुराकानीको आवश्यकता नभएमा यानी तपाईले थोरै/कुनै पनि क्यान्टोनिज/अंग्रेजी प्रवीणता नभएको कर्मचारी नियुत्ती गर्न आवश्यक छ ।
तपाईले ट्रक चालक राख्न चाहानु हुन्छ र त्यहाँ चिनियाँ कामदार छ जसले ठेगाना पढ्न सक्छ भने तपाईलाई यस्तो कर्मचारीको आवश्यकता छ जसले थोरै/कुनै पनि क्यान्टोनिज/अंग्रेजी प्रवीणा नभएको तर पर्याप्त क्यान्टोनिज/अंग्रजी बोल्न सक्ने जसले गर्दा उनीहरुले चिनियाँ कामदार सँग कुराकानी गर्न सक्छन् ।
2. सांस्कृतिक सम्बेदनशीलता
धार्मिक चलन अल्पसंख्यक जातीय कामदारको धार्मिक कारणले उनीहरूको अलग पहिरन कोड, खाना खाने बानी र दैनिक प्रचलनहरू फरक हुन सक्छ।
हिन्दु, इस्लाम र सिख सम्बन्धी थप जानकारीको लागि यहाँ दबाउनुहोस्
हरेक जातीय समुहको आफ्नो चाडपर्व हुन्छ- अल्पसंख्यक जातीय कामदारलाई धार्मिक पूजा गर्नु र सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउनु पर्छ।
चाडपर्व क्यालेन्डर डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
(इन्डियन, पाकिस्तानी, थाइ, इन्डोनेशियन, नेपाली र फिलिपिनो)
मेरो अल्पसंख्यक जातीय कामदारले काम शुरू गर्न अघि मैले के तयारी गर्नु पर्छ?
वर्तमान कामदारहरूलाई अल्पसंख्यक जातीय कामदारको बारेमा बताउनुहोस्। माथिको जानकारी बाड्नुहोस। यसले समझदारीपुर्ण काम गर्ने वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ।
अल्पसंख्यक जातीय कामदारको लागि कामको बारे परिचय दिनुहोस्।यदि आवश्यक परेमा, सुनिश्चित गर्नको लागि मुख्य बुदाहरू अंग्रेजी वा उनीहरूको जातीय भाषामा अनुवाद गर्नुहोस् जसले गर्दा अल्पसंख्यक जातीय कामदारहरूले महत्त्वपुर्ण नोटहरू पुरा बुझोस्।
गर्नु हुने र गर्नु नहुने कुराहरू अल्पसंख्यक जातीय कामदारहरूलाई स्पष्ट गरी कारणहरू दिएर बताउनुहोस् ताकि गलत नबुझोस्।
के मलाई अल्पसंख्यक जातीयहरूलाई काममा राख्न सहयोग गर्न CHEERको कुनै सेवा छ?
रोजगारदाताहरूलाई रिक्त्त ठाउँको लागि फारम पुरा गरेर CHEER मा रिक्त्त ठाउँहरूको जानकारी दिन स्वागत छ।
रिक्त्त ठाउँहरूको फारम पाउने बित्तिकै CHEER ले तपाईंको कम्पनीको रिक्त्त ठाउँहरूको आवेदनलाई हेर्नेछ।
हरेक रिक्त्त ठाउँहरूको अडर –2महिनाको लागि मान्य रहनेछ।
रिक्त ठाउँहरुको कार्यवाही भइरहेको बेलामा वा जब रिक्त ठाउँहरुको अडर मान्य भइरहेको बेलामा तपाईलाई एउटै आवेदन नदिनको लागि आग्रह गर्दछौ । यदि तपाईको सम्पर्क गर्न माध्यम वा कामको शर्तहरू फेरिएमा वा यदि काम दिइसकेमा कृपया हामीलाई तुरून्तै खबर गर्नुहोस्।
CHEER ले रिक्त्त ठाउँहरूको अडरहरूलाई फेर्न र विषय बस्तुहरूलाई संसोधन गर्न अधिकार राख्दछ; र तपाईंले CHEER लाई र CHEER को वेबसाइटमा दिनु भएको कुनै पनि रिक्त्त ठाउँहरू अडरको कार्यवाही गर्न वा प्रदर्शन गर्न इन्कार अधिकार राख्दछ।
रोजगार रिक्त ठाउँहरुको लागि यहाँ दबाउनुहोस् ।